आईतबार, मंसिर २९, २०७६ प्रकाश अधिकारी
-यो प्रश्न , कुन रङ्ग कुन डिजाइनको माल बनिदैछ भनेर कुनै कारखानालाई अथवा कुन मोडल कुन लटको गाडी आयात गरिदैछ भनेर नाफाखोर दलाललाई सोध्ने जस्तो प्रश्न भयो । अथवा कुनै घोर व्यवसायिक आख्यानकार या ती निबृत्त सरकारी पदाधिकारी जो आत्मकथा लेख्न पल्किरहेकाछन उनिहरुलाई सुहाउने प्रश्न जस्तो भयो । म त एक कवि । कविले कुनै अमुक पुस्तकको ठेली बनाउछु भनेर कविता लेख्दैन। कविता लेख्नु भनेको पुस्तकको व्यबसाय भन्दा हिड्दा हिड्दै एड्भेन्चर गर्नु हो । कविता लेख्नु बन्जी जम्प गर्नु जस्तै हो ।
तपाईंले लेख्दै गरेको पुस्तक किन पढ्ने ?
-मेरो पुस्तक - यद्यपि कविताको पुस्तक भनेको मेरो लागि अनेक हिसाबले अतिरिक्त जोखिम जस्तै हो । तैपनी लेख्दा लेख्दै कथं त्यो कुनै ठेलि भैहालेछ भने त्यसलाई कुनै पनि मुनाफाको हिसाबले नपढ्नू। त्योभित्र बन्जी जम्पमा प्रदर्शित शाहास र दुश्साहास कति छ त्यो हेर्नलाई पढ्नू। नत्र कसैले पनि नपढ्नू ।
-नेपालमा पाठक भनिने छुट्टै वर्ग छ जस्तो लाग्दैन मलाई । हामी नै कथित लेखक हामी नै पठित पाठक । यदि यो भन्दा पर साच्चै पाठक कोहि छ भने उसले यथार्थमा साहित्य माग्दैन । हामी केवल कपोलकल्पित धारणा बनाउँछौ र उसको नाममा साहित्य नामको व्यवशाय गर्छौँ ।
कवि भुपाल राई
साहित्यमा भित्रिएको विकृतिबारे तपाईंकाे धारणा ?
- सहानुभुतिको नाममा समाजको अतिरञ्जना र पीडाको लेखकिय व्यबसाय साहित्य नहुनु पर्ने हो।
- युवाहरुमा एडभेन्चर कम एडभर्टाइज बढी देखिन्छ।
तपाईंलाई कस्ता पुस्तक लेखियोस् जस्तो लाग्छ ?
- कस्ता पुस्तक लेखियोस भन्दा पनि अनुहारको सहि तश्बिर नखिच्ने आख्यान नलेखियोस जस्तो लाग्छ ।
आईतबार, मंसिर २९, २०७६, ०७:१२:००
मंगलबार, भदौ ३०, २०७७ प्रकाश अधिकारी